सानिमा बैंकको ऋणपत्र आजदेखि निष्काशन, कति कित्ता दिने आवेदन ? - Beemapost.com
सानिमा बैंकको ऋणपत्र आजदेखि निष्काशन, कति कित्ता दिने आवेदन ?
१० असार २०७९, शुक्रबार १०:४४
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले आज (असार १० गते)देखि ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । बैंकले वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘१०.२५ प्रतिशत सानिमा डिबेन्चर २०८९’ नामक ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न गरेको हो । सो ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष रहनेछ ।
सो ऋणपत्र खरिदका लागि छिटोमा असार १४ गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ । सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि असार २४ गतेसम्म लम्बिनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम २० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सी आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट सो ऋणपत्र खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।